Ipatio yabucala yaseCasa Papaya esecaleni kwefama - I-Airbnb
Ipatio yabucala yaseCasa Papaya esecaleni kwefama
Indawo yokukhempisha sinombuki zindwendwe onguKevin
Balekela kwindawo ekhethekileyo, ezinzileyo kwaye elungelelaniswe ngokugqibeleleyo phakathi kweembono ezimbini ezintle kakhulu kwisiqithi sethu: INtaba kunye noNxweme. Vuka ukutshona kwelanga ePuerto Rican ehlamba iifestile zakho ngezibane zegolide, yonwabele intsasa yakho ngevumba kunye nencasa yekofu eseyinziwe ngokutsha yasePuerto Rican kwaye ulale phantsi emva kokutshona kwelanga ukuze ujonge iinkwenkwezi ngomoya omtsha wolwandle.
I-House Papaya yindawo ehlaziyiweyo yeTrailer yeCamper enendawo yayo yabucala ejikelezwe yipapaya, iplantain, ibhanana kunye nezityalo ze-noni ezenza le ndlu ingabikho ngaphantsi kweqhekeza lomntu weparadesi. Inqwelwana inegumbi lokulala labucala elinebhedi enkulukazi, ibhedi yosuku, ikhitshi, ithala leplanga elinejacuzzi, ihammock kunye neBBQ. Igumbi lokuhlambela lixinene, lineshawari yangaphakathi kunye neshawari yangaphandle ekuvumela ukuba ube namava angaphandle ngelixa uhlamba emva kosuku olude elunxwemeni. Xa ujonge ukuqhawula kwi-Wi-Fi yethu, kumanyathelo nje ambalwa ukusuka ekungeneni ungahamba ngomnyango wakho wabucala wamaplanga odibanisa noLwandle lweCaribbean kunye nokutshona kwelanga okuhle okubomvu okupeyintiweyo. Indlu ikwifama yethu yokuhlala ecaleni kwesakhiwo sokuhlala kumhlaba wayo wabucala. Ilungele izibini okanye iintsapho ezifuna indawo yokuhlala eyahlukileyo kunye neyodwa kwicala elikumazantsi-mpuma ePuerto Rico. I-Digital nomads ezikhetha isandi solwandle kunye nezilwanyana zasendle zesiqithi ukuya kwingxakeko yesixeko nazo zamkelekile.
Ngaphandle kweFinca Corsica, idolophu yasePatillas kunye nazo zonke iidolophu ezikufutshane zibonelela ngeendawo zokutyela ezininzi, iibhari, i-chinchorros, iivenkile, izikhumbuzo, iindawo zendalo, iindawo ezinomtsalane kunye neelwandle zokusefa ezihambelana namava akho. Ungalibazisi ukusibuza malunga naziphi na iingcebiso malunga nezinto ekufuneka zenziwe okanye indawo yokutyela. Sikwavulelekile kuyo nayiphi na imibuzo malunga nomsebenzi wokuzithandela efama ukuba ngaba unawo nawaphi na amava okanye awunawo. Konwabele ukuhlala kwakho!